मध्येरातमा ठमेलमा बिदेशीमाथि खुकुरी प्र’हार ! मृ’त्युबाट बचेका यी बिदेशी मिडियामा (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/मध्येरातमा ठमेलमा बिदेशीमाथि खुकुरी प्र’हार ! मृ’त्युबाट बचेका यी बिदेशी मिडियामा (भिडियो सहित)
काठमाडौँको ब्यस्त पर्यटकीय स्थल ठमेलमा मध्येरातमा एक बिदेशी पर्यटकमाथि खुकुरी प्र’हार भएको छ । केहि व्यक्तिहरु बीचको झ’गडा मिलाउन खोज्दा उनीमाथि पछाडीबाट खुकुरी प्र’हार भएको हो । करिब ४ जनाको समूह आएर उनी र अर्का एक नेपालीमाथि पनि खुकुरी प्र’हार गरेको बताईएको छ । एक जना केटीमाथि ज’बरज’स्ती गर्न खोज्दा स्पेनका जौमा नाम गरेका बिदेशीले छुटाउन खोज्दा उनलाई अर्का युवाले खुकुरी प्र’हार गरेको बताएका छन् ।
यहि मार्च ७ तरिकका दिन ठमेलमा खाना खान भनेर जाने क्रममा झ’गडा गर्दै गरेका बेला झ’गडा नगर्नुस् भनी आग्रह गर्दा आफुमाथि नै खनिएको र हा’तपा’त गरेको बताएका छन् । करिब १० बजे राति आफुमाथि भएको त्यस्तो व्यवहारले निकै ड’र लागेको र दु:खि बनाएको जौमाले बताएका छन् । आफूसहित ३ जनामाथि खुकुरी प्र’हार भएको र उनको टाउकोको पछाडी, हात र अनुहारका केहि भागमा चोट लागेको छ । घटना पश्चात प्रहरीमा गएर उजुरी दिएको बताए ।
सिसिटिभी फुटेजमा ती युवाहरु भागेको कैद भएको र अहिले उनीहरुलाई खोज्ने काम भइरहेको पनि जनाईएको छ । मृ’त्युबाट बचेका यी बिदेशी मिडियामा आएका छन् । हेर्नुस् त्यस दिन भएको घटनाको बारेमा उनै बिदेशी नागरिकसँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा :